Izindaba - Unyaka osangene womkhakha womhlaba ongalukanga
Ngenxa yomthelela wesifo esisha somqhele ngo-2020, izimboni eziningi ziye zabhekana nesikhathi sokuphela, futhi imisebenzi ehlukahlukene yezomnotho imile okwesikhashana. Kulesi simo, imboni yezindwangu engalukiwe imatasa kakhulu kunakuqala. Njengesidingo semikhiqizo efana ne-ukusula okubulala amagciwanefuthi buso bufinyelele emazingeni angakaze abonwe kulo nyaka, imibiko yezindaba mayelana nokwanda kwesidingo sezinto ezisetshenziswayo (izinto ezincibilikisiwe ezishisiwe) sekuyinsakavukela, futhi abantu abaningi bezwe igama elisha okokuqala-hhayi indwangu ye-Spun, abantu baqala ukukhokha ngaphezulu ukunaka iqhaza elibalulekile lezinto ezingalukiwe ekuvikeleni impilo yomphakathi. U-2020 angahle abe unyaka olahlekile kwezinye izimboni, kepha lesi simo asisebenzi embonini engalukanga.
Ukuphendula i-Covid-19, izinkampani zandisa ukukhiqizwa noma zandisa ububanzi bebhizinisi labo ezimakethe ezintsha
Sekuphele isikhathi esingaphezu konyaka selokhu kwabikwa amacala kaCovid-19. Njengoba leli gciwane lasakazeka kancane kancane lisuka e-Asia laya eYurophu futhi ekugcineni laya eNyakatho naseNingizimu Melika ezinyangeni ezimbalwa zokuqala zika-2020, izimboni eziningi zibhekene nokumiswa noma ukuvalwa. Imboni yezindwangu engalukanga isiqalile ukukhula ngokushesha. Izimakethe eziningi zezinsizakalo ezingalukiwe (ezokwelapha, ezempilo, ezokukhucululwa kwendle, ama-wipe, njll.) Kumenyezelwe njengamabhizinisi abalulekile isikhathi eside, futhi kunesidingo esikhulu esingakaze sibonwe semishini yezokwelapha njengezimpahla zokuzivikela, izifihla-buso, nemishini yokuphefumula. Kusho futhi ukuthi izinkampani eziningi embonini kumele empeleni zenyuse ukukhiqizwa noma zandise amabhizinisi azo akhona abe izimakethe ezintsha. Ngokusho kukaJacob Holm, ongumkhiqizi wezindwangu ze-Sontara spunlace, njengoba isidingo semishini yokuzivikela (PPE) sikhuphukile ngoMeyi, ukukhiqizwa kwale nto kukhuphuke ngo-65%. UJacob Holm ukhulise kakhulu umkhiqizo ngokususa ukukhubazeka kweminye imigqa ekhona nokunye ukuthuthuka, futhi kungekudala umemezele ukuthi kuzokwakhiwa imboni entsha yokwandisa umhlaba, ezoqala ukusebenza ekuqaleni konyaka ozayo. IDuPont (iDuPont) ibilokhu ihlinzeka ngeTyvek nonwovens emakethe yezokwelapha iminyaka eminingi. Njengoba i-coronavirus ihambisa isidingo sezinto zokwelashwa, iDuPont izodlulisela izinto ezisetshenzisiwe emakethe yokwakha nezinye izinhlelo zokusebenza ziye emakethe yezokwelapha. Ngasikhathi sinye, yamemezela ukuthi izoba seVirginia. Umbuso wandise umthamo wokukhiqiza ukukhiqiza ngokushesha imikhiqizo yokuvikela yezokwelapha. Ngaphezu komkhakha ongalukiwe, ezinye izinkampani ebezingazibandakanyi ngokwesiko ezimakethe zezokwelapha ne-PPR nazo zithathe izinyathelo ezisheshayo ukuhlangabezana nesidingo esikhulayo esidalwa yigciwane lomqhele elisha. Umakhi wemikhiqizo yokwakha nokukhethekile uJohns Manville uzophinde asebenzise izinto zokwenziwa meltblown ezikhiqizwe eMichigan ukwenza imaski yobuso nokusetshenziswa kwamaskhi, kanye nama-spunbond nonwovens wezicelo zezokwelapha eSouth Carolina.
Abakhiqizi bezindwangu ezihola phambili ezimbonini zokwandisa umthamo wokukhiqiza we-meltblown kulo nyaka
Ku-2020, kucishe kufakwe izintambo ezintsha zokukhiqiza ezincibilikayo ezingama-40 eNyakatho Melika kuphela, futhi kungongezwa imigqa emisha yokukhiqiza eyikhulu emhlabeni jikelele. Ekuqaleni kwesifo, umhlinzeki wemishini yokuncibilika okuncibilikayo uReifenhauser umemezele ukuthi kunganciphisa isikhathi sokulethwa kukalayini we-meltblown sibe yizinyanga eziyi-3.5, ngaleyo ndlela sinikeze isisombululo esisheshayo futhi esithembekile ekushodweni kwamaski emhlabeni jikelele. IBerry Group ibilokhu ihamba phambili ekukhulisweni komthamo we-meltblown. Lapho kutholakala usongo lwegciwane elisha lomqhele, uBerry wayesezithathile izinyathelo zokwandisa umthamo we-meltblown. Njengamanje, uBerry usungule imigqa emisha yokukhiqiza eBrazil, e-United States, eChina, e-United Kingdom nase-Europe. , Futhi ekugcineni izosebenza ngezintambo eziyisishiyagalolunye zokukhiqiza ezincibilikisa umhlaba wonke. Njengo-Berry, iningi labakhiqizi bezindwangu ezinkulu ezingakelukiwe emhlabeni bandise amandla abo okukhiqiza ancibilikayo kulo nyaka. ILydall ingeza imigqa emibili yokukhiqiza eRochester, eNew Hampshire, nolayini owodwa wokukhiqiza eFrance. I-Fitesa isetha imigqa emisha yokukhiqiza i-meltblown e-Italy, Germany nase South Carolina; USandler utshala imali eJalimane; UMogul ungeze imigqa emibili yokukhiqiza encibilikayo eTurkey; UFreudenberg ungeze umugqa wokukhiqiza eJalimane. Ngasikhathi sinye, ezinye izinkampani ezintsha emkhakheni we-nonwovens nazo zitshale imali emigqeni emisha yokukhiqiza. Lezi zinkampani zisukela kubanikezeli bezinto ezibonakalayo ezinkulu ezivela emazweni omhlaba ziye eziqalweni ezincane ezizimele, kepha inhloso yabo efanayo ukusiza ukuhlangabezana nesidingo somhlaba wonke sezinto zokufihla ubuso.
Abakhiqizi bemikhiqizo yezenhlanzeko emunca umkhiqizo bandise ububanzi bawo bebhizinisi kuye ekukhiqizeni imaski
Ukuze kuqinisekiswe ukuthi kunomthamo owanele wokukhiqiza ongalukiwe ukuhlangabezana nezidingo zemakethe yobuso, izinkampani ezimakethe ezahlukahlukene zabathengi seziqalile ukukhulisa ukukhiqizwa kwamamaski. Ngenxa yokufana phakathi kokwenziwa kwamamaski nemikhiqizo yokuhlanzeka okumunca, abenzi bamanabukeni nemikhiqizo yenhlanzeko yabesifazane baba seqhulwini lalezi zimaski zokuguqula. Ngo-Ephreli walo nyaka, i-P & G yamemezela ukuthi izoshintsha amandla okukhiqiza futhi iqale ukukhiqiza imaski ezindaweni ezicishe zibe yishumi zokukhiqiza emhlabeni jikelele. Isikhulu esiphezulu seProcter & Gamble uDavid Taylor uthe ukukhiqizwa kwamaskhi kwaqala eChina futhi manje kuyanda eNyakatho Melika, eYurophu, e-Asia Pacific, eMiddle East nase-Afrika. Ngaphezu kweProcter & Gamble, i-Essity yaseSweden imemezele izinhlelo zokukhiqiza imaski emakethe yaseSweden. Isazi sezempilo saseNingizimu Melika i-CMPC simemezele ukuthi sizokwazi ukukhiqiza imaski eyizigidi eziyi-18.5 ngenyanga ngenyanga ezayo. I-CMPC ingeze imigqa emihlanu yokukhiqiza imaski emazweni amane (iChile, iBrazil, iPeru neMexico). Ezweni / esifundeni ngasinye, izimaski zizonikezwa izinsizakalo zezempilo zomphakathi mahhala. NgoSepthemba, i-Ontex yethule ulayini wokukhiqiza onomthamo wokukhiqiza waminyaka yonke cishe wamamaski angama-80 wezigidi embonini yayo i-Eeklo eBelgium. Kusukela ngo-Agasti, ulayini wokukhiqiza ukhiqize amaski angu-100,000 ngosuku.
Umthamo wokukhiqizwa kwama-wet wipe ukhuphukile, futhi ukuhlangabezana nezidingo zemakethe zamanzi asulwayo kusabhekene nezinselelo
Kulo nyaka, ngokwanda kwesidingo sokusulwa kwamagciwane okusula amagciwane kanye nokwethulwa okuqhubekayo kwezicelo ezintsha zokusula embonini, ukunakekelwa komuntu siqu nokunakekelwa kwasekhaya, utshalomali kule ndawo lube namandla. Ngo-2020, abacubungula bezindwangu ezimbili ezihamba phambili emhlabeni, iRockline Industries neNice-Pak, bobabili bamemezele ukuthi bazokwandisa kakhulu ukusebenza kwabo eNyakatho Melika. Ngo-Agasti, abakwaRockline bathi bazokwakha umugqa omusha wokukhiqiza amagciwane wokuqothula amagciwane obiza ama-US $ 20 million eWisconsin. Ngokwemibiko, lolu tshalo-mali luzophinda kabili amandla emikhiqizo yenkampani. Ulayini omusha wokukhiqiza, obizwa nge-XC-105 Galaxy, uzoba ngomunye wemigqa emikhulu yokukhiqiza ukosula amagciwane embonini yangasese yomkhiqizo osula amanzi. Kulindeleke ukuthi kuqedwe maphakathi no-2021. Ngokunjalo, umkhiqizi wamanzi asula uNice-Pak umemezele uhlelo lokuphinda kabili umthamo wokukhiqiza wama-wifi wokuqeda amagciwane esitshalweni sayo iJonesboro. INice-Pak ishintshe uhlelo lokukhiqiza lwefektri lwaba amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngecebo lokukhiqiza ngeviki, ngaleyo ndlela kwandiswa umkhiqizo. Noma izinkampani eziningi zikhulise kakhulu umthamo wokukhiqiza wama-wipe asemanzi, zisabhekene nezinselelo ekuhlangabezaneni nesidingo semakethe sokusulwa kwe-disinfection. NgoNovemba, uClorox wamemezela ukwanda komkhiqizo nokubambisana nabaphakeli abavela eceleni. Yize kucishe kutholakale amaphakethe ayisigidi wama-Clorox wipes athunyelwa ezitolo nsuku zonke, namanje awakwazi ukuhlangabezana nesidingo.
5. Ukuhlanganiswa kohlelo lokuhlinzekwa kwemboni yezempilo sekuyinto ecacile
Eminyakeni yamuva, ukuhlanganiswa kohlelo lokuhlinzekwa kwemboni yezempilo kuqhubekile. Lo mkhuba uqale lapho iBerry Plastics ithola i-Avintiv futhi yahlanganisa ama-nonwovens namafilimu, okuyizinto ezimbili eziyisisekelo zemikhiqizo yenhlanzeko. Lapho uBerry ethola uClopay, umkhiqizi wobuchwepheshe befilimu obuphefumula ngo-2018, waze wandisa nokusebenziseka kwakhe emkhakheni wamafilimu. Kulo nyaka, omunye umkhiqizi wendwangu ongavukiwe uFitesa uphinde wandisa ibhizinisi lakhe lamafilimu ngokutholwa kwebhizinisi leTredegar Corporation's Personal Care Films, kufaka phakathi isizinda sokukhiqiza eTerre Haute, Indiana, Kerkrade, eNetherlands, eRétság, eHungary, eDiadema, eBrazil nasePune, India. Ukutholwa kuqinisa ifilimu likaFitesa, izinto zokweluka kanye nebhizinisi le-laminate.